Ngwa Ngwa Ngwa | Nkedo ngwa ngwa - Mepụta - promepụta Techto Tech Co., Ltd.
Ọrụ / Ngwa ngwa ngwa
Mepụta ihe a na-achọ na-enye ngwa ngwa ngwa ngwa nke aluminom na ígwè na plastik na-akpụzi ịkpụzi iji tụgharịa akụkụ ihe ndetu gị n'ime izu 2-5.
Si ọtọ prototype, ka obere agbaba, na mgbe ahụ mmepụta akụkụ, anyị ikpokọta ngwangwa injection ịkpụzi Filiks na proprietary technology na ahụmahụ otu napụta elu àgwà injection ịkpụzi akụkụ, na-enyere gị belata imewe ize ndụ na-azọpụta mkpokọta mmepụta-akwụ ụgwọ.
Oldkpụzi ihe eji eme ihe | Mepụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa site na prototype na mmepụta
Volumedị olu dị ala bụ ụzọ kachasị mma iji chekwaa oge na ọnụahịa maka ụdị nnwale ma dabara yana nnwale ahịa nke mbido, mana agbanyeghị ọ gaghị enwe ike itolite ngwụcha ngwụcha na nsonaazụ ọrụ nke nsị ndị a kpụrụ akpụ. Mgbe mmepụta ngwa ọrụ gị agaghị adị njikere maka ọnwa, ịkpụzi ngwa ngwa (nke a makwaara dị ka ịkpụzi prototype ma ọ bụ ngwa ọrụ dị nro) mgbe ahụ bụ nhọrọ dị ukwuu maka ịnata akụkụ ngwa ngwa na obere ụgwọ.
CreateProto na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-akpụzi ọgwụ na-anọghị onwe ya nke nwere ike iji ihe na usoro dị iche iche mepụta ngwa ọrụ mmiri maka nnwale nnwale na nyocha ọhụụ. Anyị na-ewepụta akụkụ ndị a kpụrụ na oge gị iji kwado nnwale gị niile, ma nyere aka dozie nsogbu usoro ga-ekwe omume na mmepụta zuru ezu.
Na CreateProto, anyị bụ ọkachamara na ngwa ngwa ngwa ngwa nke ma aluminom na nchara na obere nkedo plastik. Site na ahụmịhe na teknụzụ na ịkpụzi ọgwụ, ngwa ọrụ ngwa ngwa, ịkpụzi CNC, EDM nhazi, na ọpụrụiche ọpụrụiche, anyị na-ahụ na akụkụ gị kpụrụ zutere ma gafere atụmanya gị kachasị elu.
Mepụta ọtụtụ narị na otu puku ihe nkedo a na-akpụzi nwere ike inyere gị aka nke ukwuu tupu ị gaa na mmepụta ihe. Onye ọkwọ ụgbọelu na-agbazi ịkpụzi ọgwụ ga-enwe ike idozi oghere dị n'agbata prototype na mmepụta, mee ka ọrụ gị na ụdị nyocha dabara adaba ọsọ ọsọ, nye gị ohere igosi ndị ahịa na ndị na-ere ahịa ihe ngwaahịa mechara, ma mee ka esemokwu ọ bụla chọpụta ma mezie. ọma tupu ha agafere n'ichepụta ihe.
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na - abụkarị ihe dị ọnụ ala karịa nrụpụta nrụpụta n'ihi ọsịsọ na - ewu ụlọ na oge dị mkpụmkpụ karịa, yabụ na-ebelata ebu na mkpụmkpụ nrụpụta.
Usoro ikike anyị na ndị otu ahụmahụ na-elekwasị anya na oru ngo gị na-enyere anyị aka imebi oge ụlọ ọrụ na-ebute ụzọ maka ịkpụzi na ịkpụzi. Ọ dịghị mkpa imebi na-ejedebe gị imewe ka anyị usoro, n'ihi na anyị nwere akụrụngwa, ikike, na ihe ọmụma napụta gị kpụrụ akụkụ n'ime 2-5 izu, n'agbanyeghị ihe ụlọ ọrụ na ị na. Simplified Ọgwụ na ịkpụzi usoro na-akwalite gị mmepe ngwaahịa.
Gba Ọgwụ Ngwa Ngwa | Nrụpụta Nke Dị Ala Dị Ka Ngwọta Ngwọta Na-efu
Otutu injection ịkpụzi bụ otu n'ime plastic ịkpụzi, nke nwere ike ọ bụghị naanị na-Nlụpụta ọtụtụ narị pilot na-agba ọsọ mmepụta maka ule prototypes nso ikpeazụ ngwaahịa, ma na-enye na-ina mmepụta nke ọgwụgwụ-eji akụkụ maka ala-olu n'ichepụta. Ghọta ọtụtụ akụkụ ndị ị kpụrụ akpụ ị nwere ike ịchọrọ ga-enye gị ohere ka mma maka itinye ego gị na onye òtù ọlụlụ gị na ndụ ngwa ọrụ yana usoro teknụzụ.
Na CreateProto, Anyị na-agwakọta usoro ịkpụzi usoro ịkpụzi ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa iji mepụta ngwa ngwa plastik ngwa ngwa ma na-eri ihe ọ bụla na arụmọrụ dị mma karịa nke a kpụrụ akpụ ka na-emepe emepe na ule. Createproto na-ewe usoro proactive na-arụ ọrụ plastik, na-enye ndụmọdụ na-efu ma na-echekwa site na atụmatụ, akụrụngwa, usoro nrụpụta, nrụpụta, wdg. Anyị na-ekpebi ụzọ kachasị mma ị ga-aga n'ọma ahịa dabere na ebumnuche na atụmatụ gị. Ndị injinia anyị na nna anyị ukwu nwere ike ime ka usoro a belata ihe mgbu na iwe oge iji jide n'aka na akụkụ gị nwere ike kpụzie ka ezubere, site na mbido. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ngwa ngwa ngwa ngwa ọdịnala, ị nwere ike bulite faịlụ CAD na-akwụghị ụgwọ ebe ahụ.
Kachasị Design maka Manufacturability (DFM)
Imewe maka imepụta ihe (DFM) na-ekpuchi akụkụ niile nke usoro ịkpụzi ọgwụ site na imepụta akụkụ, imepụta ihe eji akpụzi, yana nhọrọ ihe maka nhazi.
Site na afọ 20 nke ahụmịhe bara uru na ịkpụzi ọdịnala na ngwa ngwa ngwa ngwa, ndị injinia anyị ga-etinye ọnụ mkparịta ụka mmekọrịta zuru oke na nyocha nke arụmọrụ, ma nwee ike iduzi nyocha nyocha iji kwado teknụzụ kachasị mma maka akụkụ gị. Gụnyere ụdị ọnụ ụzọ na ọnọdụ, akara nkewa, akwụkwọ edemede, sistemụ ọsọ, slide na fanye, ịpụpụ ya, oke nkenke, nnabata na mmecha elu, ihe niile dị mkpa mgbe ọ bịara oge maka imepụta ihe.
Enweghị mkpa ichere maka imepụta ihe iji kpughee nsogbu gbasara imewe, n'ihi na iji imepụta ihe kachasị mma maka imepụta ihe, ndị injinia anyị ga-ahụ na akụkụ gị nwere ike ịdaba ma kpụzie ya ka ọ bụrụ ọnụ ahịa-nke ọma.
Họrọ Ihe Kwesịrị Ekwesị nke Ngwá Ọrụ
Na CreateProto, teknụzụ anyị na-enye ikike zuru oke na-enye ikike yana nkwado ozugbo maka mgbanwe ngwa ọrụ. Site na ịkpụzi ụdị nke a na -emepụta ngwa ọrụ anyị nwere ike ime ka ịkpụzi ngwa ọrụ sitere na Aluminium 7075, P20 na NAK80 nchara siri ike na H13 nchara siri ike.
Ihe ziri ezi nke ebu ebu na oru gi di oke nkpa n’icheputa ihe. Dịka, nke a ga-agụnye ntụle dị ka ebumnuche ojiji, mkpa olu, na itinye ego na-atụ anya, yana mgbagwoju anya imepụta, usoro ebu, wdg. Amaghị nke ị ga-ahọrọ? Anyị ga-enyere gị aka ịtụle uru ọ bụla ndị a iji chọta ihe ngwọta kacha mma maka mkpa ngwaahịa gị.
Ọzọkwa, anyị na-enye ọkọlọtọ SPI mechara, ederede EDM na ọtụtụ etched textures gụnyere Mold-Tech® MT usoro na usoro VDI® 3400. Di iche-iche ihe onunu bụ avaliable e maka ngwaahịa gị imewe.
Efu-irè akpụzi Manufacturing Usoro
Ntughari injinia na-aga n'ihu na-akwado usoro nhazi ọrụ anyị na-efu. CreateProto na-amalite usoro nyocha a na gị na ndị injinị anyị. Anyị kwenyere na nnukwu ihe ngwọta pụtara nkwukọrịta zuru oke ugbu a hụ na ị nwere ike ịnweta nhọrọ nhọrọ dịnụ.
Iji mezuo mkpa nke mmepụta ngwa ngwa na mbelata ego, a na-ejikarị usoro Master Unit Die (MUD) agbanwe ngwa ngwa iji gbanwee ntọala ebu nke gosipụtara iji chekwaa oge ọrụ ma belata ụgwọ. Ọbụna nke kachasị mkpa, ngbanwe injinia gụnyere naanị ntinye MUD, ọ bụghị ntọala ebu zuru oke. Nwekwara ike ijikọ ọtụtụ akụkụ ndị yiri ya ọnụ na ihe a maara dị ka ngwa ezinaụlọ maka nchekwa dị ukwuu. Na mgbakwunye, a na-ejikarị ntinye akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ọkara akpaka na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ngwa Aluminom Ngwa Ngwa | Ọnụ ego dị ala & Oge Na-ewelata
CreateProto nwere ọtụtụ afọ na imepụta ngwa ngwa ngwa ngwa aluminom. Otutu, ihe eji eme alumini nke emere site na AL7075 (nke bu ugbo elu –grade aluminom) di ike ma sie ike dika ngwa ahia P20. Ebe ọ bụ na aluminom dị arọ dị mfe ma rụọ ọrụ dị mma, ngwá ọrụ aluminom na-ebelata ụgwọ iji wuo ihe nkedo megidere ígwè siri ike dịka ọ nwere ike ịhazi 15% -30% ngwa ngwa ma kpochaa 3-10 ugboro ngwa ngwa. N'ihi na a dịgasị iche iche nke sitere na site na-eri, na-edu ndú ugboro, mpịakọta wdg, ọtụtụ ọgwụ ịkpụzi ụlọ ọrụ na-amalite itinye ọtụtụ ihe mesiri ike na aluminum ọgwụ ebu na tooling.
Nwere akụkụ dị mgbagwoju anya, nke nwere nnabata siri ike, na iche iche na imecha elu dị iche iche? Echegbula. Usoro akụrụngwa anyị nke aluminom nwere ike ijikwa ya ma anyị agaghị agwa gị ka ị gbanwee ihe ọ bụla, ma nye gị ohere ịbịaru ahịa kachasị ọsọ na obere ego.
Mgbanwe Mgbanwe Ọsọ Ngwa na Ọnụ Akwụ ụgwọ Ngwá Ọrụ
Site na ịkpụzi ngwa ọrụ na ịkpụzi ngwa ngwa, ihe eji akpụ akpụ aluminom anyị agabigala ngwa ọrụ ya. Enwere ike inweta ndụ ndụ ngwaahịa 100,000 na oghere aluminom.
Enwere ike iji aluminom mee ihe ebu MUD, nke putara ugwo ihe oru di ala na mmegharia ohuru ngwa ngwa, ma nye mgbanwe mgbanwe di omimi maka nhazi oge.
Ngwa ngwa ngwa arụmọrụ nke aluminom na-enye anyị ohere imepụta ebu ahụ ozugbo, dịka ọmụmaatụ, ọgịrịga, okirikiri, nkọ ọnụ na na. Ọ na-ebelata oge iji mee ọgwụgwọ EDM na Waya EDM.
Aluminom bụ ezigbo onye na-eduzi ọkụ. Njikere dị jụụ n'ozuzu pụtara ịbelata oge okirikiri na akụkụ ngwa ngwa, ma na-enye anyị ohere ịhazi n'emeghị ka ọwa dị jụụ.
Ngwaọrụ aluminom dị mfe igwe karịa ngwa igwe. Yabụ mgbanwe mgbanwe anaghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ na-abaghị uru.
Lokwụ Aka: Simplezọ Dị Mfe Maka Akụkụ Mgbagwoju Anya
Ngwa ngwa aluminom na ngwa eji emeputa ihe di iche na uzo nke imeputa geometries di omimi n’ime ihe eji eme ihe, dika ihe ndi ozo na eri, wdg. .
Aka ibu bụ machined mmiri na-aka ịtinye n'ime ejector akụkụ nke a ebu tupu onye ọ bụla ogbugba. Ozugbo agbachara nkedo ahụ, ibu aka na-adọnye ya na akụkụ plastik a kpụrụ. Onye ọrụ na-ewepu ibu ọrụ aka site na akụkụ ahụ ma weghachite ha n'ime ebu maka ogbugba ọzọ.
Ibu aka na ọnọdụ ndị a na-enye ngwọta dị mfe maka nsogbu ịma aka dị mgbagwoju anya, nke nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma maka ịmepụta nke ọma akụkụ plastik na obere olu na-akwụ ụgwọ dị ala na obere oge ndu.
Plastic Ọgwụ na ịkpụzi | Ezi Ntinye Ulo Oru
Usoro nke Plastic Ọgwụ na ịkpụzi
Ozugbo gị plastic injection ebu ngwá ọrụ dị njikere, na ịkpụzi usoro na-agụnye ndị na-esonụ isi nzọụkwụ:
Moldgbanyezi resin na raw pellet form, dehumidify the raw material and then load them in hopper.
Gwakọta ma kpoo pellets ahụ ruo mgbe ha ga-agbaze kpamkpam, na-eme mmiri resin.
Gbanye ihe gbazee n'ime oghere mechiri emechi site na nkedo na-agbanwe agbanwe n'ime gbọmgbọm nke igwe.
Jụzie ebu ahụ iji mee ka akụkụ dị n'ime ya sie ike.
Mepee ebu ma nweta akụkụ agwụla site ejector. Mgbe ahụ malite usoro ọhụụ.
Nhọrọ nke Ahụmahụ Ọgwụ Na-akpụzi Onye Mmekọ Bụ Ihe Dị Mkpa
Moldkpụzi ọgwụ nkedo thermoplastic bụ usoro ọkọlọtọ. Achọrọ ihe ọmụma, nkà na nka karịa, yana akụrụngwa na akụrụngwa kwesịrị ekwesị. E nwere ọtụtụ ihe dị mkpa dị mkpa ka a nyochaa na oge, gụnyere okpomọkụ, nrụgide, ọnụọgụ ihe, ike ijigide, oge na ọnụego dị jụụ, ogo mmiri na oge juputara, yana njikọta nke njirimara akụkụ maka mgbanwe mgbanwe dị iche iche. . Site na ngwa ngwa mbụ wee rụpụta ngwaahịa, enwere usoro ihe ọmụma etinye n'ime imewe na imepụta, usoro a bụ njedebe nke ọtụtụ afọ nke ahụmịhe nke ndị injinia na ndị ọkachamara nwere nkà na ndị ọrụ igwe.
CreateProto bụ onye na-emepụta obere olu, na-enwe ike ịnye ọtụtụ mpịakọta ndụ niile-site na mmadụ ole na ole ruo ihe karịrị 100,000 na ịkpụzi ọgwụ plastik. Oge ọ bụla, anyị na-etinye ọkwa nka na-enweghị atụ iji nyefee ogo na ikwughachi n'akụkụ ọ bụla. Createproto bụ onye nrụpụta ihe na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ime ihe niile n’okpuru otu ụlọ, gụnyere imewe na iwulite ihe eji arụ ọrụ, ntinye ngwa ọrụ, nhọrọ ihe, yana usoro ịkpụzi ọgwụ. Kedu ihe nke a pụtara ndị ahịa? Ọ pụtara na azụmahịa gị dị mfe ijikwa ma ị gaghị egbusi oge ma ọ bụ ego na-emeso usoro na-adịghị mma. Site na nke a, Createproto na-arụ ọrụ dị ka usoro mgbakọ akpaka.
Mgbe imewe ahụ kwụsiri ike ma ọ bụ mpịakọta na-eto eto, CreateProto ga-enyere aka ịkwaga na mmepụta nke ebu. Dị ka ahụmahụ injection ịkpụzi onye, ​​anyị na-eme ebu nhazi mfe na otutu na-eri-irè nhọrọ kwekọọ gị mkpa. Mgbanwe dịgasị iche maka plastik omenala pụtara na ị na-arụ ọrụ na otu isi mmalite maka ihe niile site na imepụta na nnyefe.
Otito Prototyping na Manufacturing, Otito Prototyping, CNC Rapid Prototyping, CNC Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Fast Prototyping,